के तपाई भेनिस ब्लाइन्डका सबै प्रकार र फाइदाहरू जान्नुहुन्छ? | शिल्प सक्रिय
के तपाई भेनिस ब्लाइन्डका सबै प्रकार र फाइदाहरू जान्नुहुन्छ?
शिल्प अन | 05/11/2021 11:32 | अद्यावधिक गरियो 05/11/2021 11:33 | शिल्प
हामी एक नवीनता को बारे मा कुरा गर्दै छैन, किनभने भेनेशियन अन्धा उनीहरू दशकौंदेखि हामीसँग छन्। तर निस्सन्देह तिनीहरू एक प्रवृति बनेका छन्, किनकि समय बित्दा पनि तिनीहरू हाम्रो जीवन र हाम्रो घरमा धेरै उपस्थित छन्। के सुरुमा तिनीहरूसँग कार्यालयहरूमा मात्र ठाउँ थियो जस्तो देखिन्थ्यो, प्रख्यात भएको छ र हामी त्यो मन पराउँछौं। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तिनीहरूका प्रकारहरू के हुन् र साथै तिनीहरूका सबै फाइदाहरू छन्?
यो थाहा पाएर, हामी भन्न सक्छौं कि हामी एक सामना गर्दैछौं सबैभन्दा लोकप्रिय अन्धा शैलीहरू संसार भर। तसर्थ, तिनीहरूसँग हाम्रो सजावट सधैं ठूलो सफलता हुनेछ। त्यसोभए, हामी तिनीहरू बिना वा तिनीहरूले हामीलाई भन्नु पर्ने सबै कुरा बिना रहन सक्दैनौं, जुन सानो छैन।
1 भेनिस ब्लाइन्डहरू के हुन्?
2 भेनिस ब्लाइन्डका प्रकारहरू के हुन्?
3 भेनिस ब्लाइन्डहरू कसरी मापन गर्ने
4 यस प्रकारको अन्धाका फाइदाहरू जुन तपाइँलाई थाहा हुनुपर्छ
भेनिस ब्लाइन्डहरू के हुन्?
तिनीहरूले हामीलाई संकेत गरे जस्तै, तिनीहरू एक प्रकारका ब्लाइन्डहरू हुन् जसको सामग्रीमा विभिन्न फिनिशहरू हुन सक्छन् तर ती सबै एक प्रकारको तेर्सो पानाहरूबाट बनेका हुन्छन्। त्यो हाम्रो घरको रक्षा गर्ने हो। यी मध्ये केही पानाहरू मोटो र अरू थोरै पातलो हुन सक्छन्, किनभने त्यहाँ सधैं सबै स्वाद र आवश्यकताहरूको लागि विकल्पहरू छन्। तिनीहरूसँग भएका लेसहरूलाई धन्यवाद, तपाईं तिनीहरूलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ वा, यसको विपरीत, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा उठाउन सक्नुहुन्छ, जब तपाईंलाई आवश्यक छ। जबकि रडहरू हुन् जसले गाइडको रूपमा काम गर्दछ, किनकि हामीले आवश्यक पर्दा थप प्रकाश प्रवेश गर्न सक्छौं वा सूर्य कडा प्रहार गर्दा यसको मार्गलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्छौं।
भेनिस ब्लाइन्डका प्रकारहरू के हुन्?
हामी भेनिस ब्लाइन्डहरूमा एक निश्चित विविधता भेट्टाउन सक्छौं किनभने तिनीहरूले बनाइएका सामग्रीहरू मात्र होइन, तर तिनीहरूका आकारहरू र अन्य धेरै विवरणहरू जुन तपाईंले अहिले पत्ता लगाउनुहुनेछ:
काठको भेनिट ब्लाइन्डहरू: तिनीहरू सबैभन्दा सुरुचिपूर्ण शैलीहरू मध्ये एक हुन्। तिनीहरू एक देहाती शैलीको घरमा अनुकूल हुन्छन्, जहाँ काठ यसमा धेरै उपस्थित हुन्छ, तर धेरै आधुनिकमा पनि। तिनीहरू सबैभन्दा बहुमुखी र सबैभन्दा छनौट मध्ये एक हुन्। बिर्सनु बिना तिनीहरू इन्सुलेट गर्दैछन्।
विभिन्न शेडहरूमा भेनिस ब्लाइन्डहरू: किनभने तिनीहरू काठबाट बनेका भए तापनि, तपाईंले ओक, अखरोट र सेतो फिनिशहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
बाँस भेनिस ब्लाइन्ड्स: तिनीहरू सबैभन्दा पारिस्थितिक विकल्पहरू मध्ये एक हुन् जुन हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ, यद्यपि हो, तिनीहरूसँग अझै पनि काठको फिनिश र फाइदाहरू छन्।
एल्युमिनियम भेनिस ब्लाइन्डहरू: काठको साथमा, यो भेनेसियन ब्लाइन्डहरूको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै अनुरोध गरिएको सामग्री हो। तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्न slats मा विभिन्न चौडाइ हुन सक्छ।
ठाडो स्लटहरूसँग भेनिसका अन्धाहरू: यद्यपि यो सत्य हो कि हामी यस प्रकारका अन्धाहरूले तिनीहरूलाई तेर्सो रूपमा कसरी लिन्छ भनेर हेर्ने बानी परेका छौं, तपाईंसँग यसको विपरीत पक्ष पनि छ। किनभने ठाडोपनले यस्तो विचारमा मौलिकता थप्छ। तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले पर्दा जस्तै काम गर्छन्।
PVC भेनिस ब्लाइन्डहरू: यदि तपाईंले अर्ध-कठोर छनोट गर्नुभयो भने यो अधिक स्थायित्वको लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हुनेछ। किनभने यो सत्य हो कि तिनीहरू गर्मीले विकृत हुन सक्छन्।
भेनिस ब्लाइन्डहरू कसरी मापन गर्ने
हामीलाई चाहिने साइज के हो भनेर राम्ररी जान्नको लागि यो आधारभूत बिन्दुहरू मध्ये एक हो। त्यसकारण, यदि तपाइँसँग एकदम स्पष्ट फाइदा छ, जहाँ दुबै पक्षमा ठाउँ छ, तपाइँसँग यो धेरै सजिलो छ। किनभने तपाईंले उक्त सञ्झ्यालको फ्रेम राम्ररी नाप्नु पर्छ र फिगर लेख्नु पर्छ। हामी त्यो आंकडामा5थप सेन्टिमिटर थप्न जाँदैछौं, तर प्रत्येक पक्षमा। किन? किनभने यस तरिकाले अन्तिम परिणाम धेरै अधिक व्यावसायिक हुनेछ, सम्पूर्ण विन्डोलाई यसको सम्पूर्णतामा कभर गर्दै।
यदि सञ्झ्याल कुना तिर छ र त्यस तर्फ कुनै ठाउँ छैन भने, हामी खाली ठाउँ भएको ठाउँमा मात्र5सेन्टिमिटर थप्नेछौं। यदि सञ्झ्यालमा भेनेसियन अन्धा दराज छ भने, हामीले यसलाई पहिले मापन गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामी आवश्यक सेन्टिमिटर बढाउनेछौं ताकि विन्डो भेनिस अन्धाले पनि ढाक्यो। एकचोटि तपाईंसँग घरमा मापन र तपाईंको भेनिस अन्धा छ, तपाईंले यसलाई सरल तरिकामा भेला गर्नुपर्नेछ। यसको लागी त्यहाँ समर्थनहरू छन् जसबाट तपाईंले तिनीहरूसँग भएका दुई पिनहरूलाई स्लाइड गर्नु पर्छ। थप रूपमा, फिक्स गर्न, तिनीहरूसँग माथिल्लो भाग छ जुन तपाईंले झुकाउनु पर्छ ताकि तिनीहरू अन्धाको रूपमा उस्तै लाइनमा छन्। जत्तिकै सरल!
यस प्रकारको अन्धाका फाइदाहरू जुन तपाइँलाई थाहा हुनुपर्छ
यो भन्नु पर्छ तिनीहरू धेरै बहुमुखी छन्, किनकि तिनीहरू सबै प्रकारका विन्डोजहरू र सजावटी शैलीहरूमा अनुकूल हुन्छन्। प्रकाश को मात्रा विनियमित गर्न को लागी तपाईले तिनीहरूलाई पार गर्न चाहानुहुन्छ, किनकि तपाईसँग मात्र अन्तिम शब्द छ। यदि हामीले परम्परागत पर्दाहरूको बारेमा सोच्यौं भने सफा गर्नु पनि सजिलो छ र यो कपडा नभएकोले, हामी माइटहरू सदाको लागि बिर्सन सक्छौं। तपाईं तिनीहरूलाई विभिन्न फिनिश र रंगहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले भेनिसका अन्धाहरूबाट थप के माग्न सक्छौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: शिल्प अन » शिल्प » के तपाई भेनिस ब्लाइन्डका सबै प्रकार र फाइदाहरू जान्नुहुन्छ?
ऊन संग 15 सजिलो र सुन्दर शिल्प
कुनै पनि अवसरमा गर्न भालु शिल्प